I-china Focus RF Anti imibimbi Machine abakhiqizi nabaphakeli | Ubuhle
Gxila i-RF Anti Wrinkles Machine
Ubuchwepheshe be-40.68mhz Monopolar Focus RF
I-Thermolift ene-Vacuum yobuso, amehlo
Isiphathi Pic Umsebenzi
I-Unipolar RF Isebenzisa amandla we-Unipolar RF ukusheshisa imetabolism yezicubu ze-adipose, ibushelelezi ngokusobala isikhumba.ukutakula amandla we-RF agxile ezingxenyeni ezijulile zesikhumba ngaphandle kokungaphatheki kahle kwesiguli.
Umshini RF I-BiPolar RF enamandla we-vacuum idala ukushisa kwasendaweni okukha phezulu
Izici zikaThermolift iDielectric Heating- indlela eyingqayizivele lapho amandla aphezulu we-radiofrequency (RF) angama-40.68 MHz (athumela amasiginali ayizigidi ezingama-40.68 ngomzuzwana) adluliselwa ngqo ezicutshini, kubangele ukujikeleza okusheshayo kwama-molecule alo amanzi. Lokhu
ukuzungezisa kudala ukungqubuzana okuveza ukushisa okunamandla nokusebenzayo. Ngenxa yokuthi isikhumba sakhiwa kakhulu ngamanzi, ukufudumeza okuvela kulo mshini kubangela ukusikeka komthamo ngaphakathi kwemicu ekhona yesikhumba futhi kuvuse
ukwakheka kwe-collagen entsha ngenkathi kuthuthukiswa ukuqina nokuqondiswa kwayo. Imvamisa ephezulu ye-RF ivumela ukushisa okujulile, okukodwa okhiqiza imiphumela efanayo.
● Izindlela ezimbili ze-RF zikhiqiza ukushisa okwelaphayo ngaphakathi kwezicubu ezihlosiwe ngezindlela ezimbili:
Amandla weBiPolar RF enza ukushisa kwasendaweni okungaphezulu
Ubuchwepheshe be-UniPolar buletha amandla we-RF agxile ezingxenyeni ezijulile zesikhumba ngaphandle kokungaphatheki kahle kweziguli.
● Ubuchwepheshe be-In-Motion ™
Ubuchwepheshe be-in-motion TM bumelela ukuqhuma kokunethezeka kweziguli futhi
ijubane lenqubo, ngemiphumela yomtholampilo ephindaphindwayo. Ukunyakaza kokushanela ngaphakathi
inqubo ifaka ukuhambisa umfakisicelo kaninginingi ngaphezulu kwendawo eqondiwe,
ukusebenzisa amandla phezu kwegridi enkulu yokwakha kabusha nokwakha izindawo ezinkulu.
Ukunyakaza kuhlinzeka ngokwakhiwa kokushisa kancane kancane ngaphakathi kwezicubu ezihlosiwe kuze kube yiyo
ifinyelela izinga lokushisa lokwelashwa, inikeze ukwelashwa okunethezeka
ngaphandle kwengozi yokulimala.
Langaphambilini Kuqondile Physiotherapy Diathermy RET CET Umshini Umshini
Olandelayo: Idivayisi encane ye-rf